केन्ट सुप्रीम लाइट र केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइन नेपाली बजारमा - Technology Khabar
» केन्ट सुप्रीम लाइट र केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइन नेपाली बजारमा
इओएल प्रालीको पानी छान्ने दुई आरओ मोडेल नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले केन्ट सुप्रीम लाइट र केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइनल मोडेल ल्याएको हो।
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको इओएल प्राली नेपालमा केन्ट उत्पादनका लागि आधिकारिक वितरक हो। यी उपकरण पानीको शुद्धिकरणको लागि प्रयोग हुन्छ।
केन्ट सुप्रीम लाइटमा केन्टको खनिज आर.ओ. टेक्नोलोजी र टीडीएस नियन्त्रकको साथ छ । यस शुद्धीकरणले तपाईंको परिवारलाई पानीबाट हुने रोगहरूबाट जोगाउँदछ । पानीलाई शुद्ध गरेर यसको अत्यावश्यक प्राकृतिक खनिजहरूलाई यथावत राख्दछ । केन्ट सुप्रीम लाइट सबै खालको पानीको शुद्धिकरणको लागि उपयुक्त हुन्छ । यसमा भएको आर.ओ. + यु.एफ.+ टीडीएस नियन्त्रणको बहु–शोधन प्रक्रियाले पिउने पानीलाई १००% शुद्ध र पिउन योग्य बनाउँदछ । यस प्रक्रियाले आर्सेनिक, रस्ट, कीटनाशक, र फ्लोराइड जस्ता विघटित अशुद्धताहरू हटाउँछ र पानी पिउन योग्य बनाउन ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूलाई पनि नस्ट गर्दछ।
केन्ट सुप्रीम लाइट पूर्ण स्वचालित स्वतः अन र अफ (बन्द) कार्यक्षमताको साथ आउँदछ । शुद्धीकरण स्वचालित रूपमा बन्द हुन्छ जब भण्डारण ट्याङ्की भरिन्छ र पुनः सुरु हुन्छ जब पानीको स्तर अधिकतम भन्दा तल खस्दछ ।
केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइनले १००% शुद्ध र खनिजयुक्त शुद्ध पानी प्रदान गर्दछ जसमा केन्टको खनिज आर.ओ. टेक्नोलोजी रहेको छ । नेपाली घरहरू र कार्यालयहरूको लागि उपयुक्त, यो उपकरण सबै खालको पानीको शुद्धिकरणको लागि उपयुक्त छ ।
केन्टको उत्कृष्ट अल्कलाइन आर.ओ. प्यूरीफायरले तपाईंको पानीको पी.एच. स्तर कायम राख्दछ । यसले पानीको पी.एच. स्तर ८.० देखि ९.० को बीचमा समायोजन गरेर पानीलाई क्षारीय बनाउँदछ ।
केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइन इन–ट्याङ्क यु.भी. कीटाणुशोधन सुविधाको साथ सुसज्जित छ । भण्डारण ट्याङ्कीमा यु.भी. एल.ई.डी.ले लामो समयको लागि पानी शुद्ध राख्दछ ।
केन्ट सुप्रिम लाइटको मूल्य २१ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ भने केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइनको बजारको मूल्य २९ हजार ९ सय ९० रहेको छ।
केन्टका पानी प्रशोधक (प्युरिफायर), एयर प्युरिफायर, कीटाणुनाशक उपकरणहरू र स्मार्ट किचन उपकरणहरू पनि उपलब्ध छन्।